Guusha Xusbiga Dimuquraadiga Ee Doorashada Dhexe Oo Trump Ku Noqonaysa Culays Siyaasiya Oo La Soo Darsay | Marsa News
Guusha Xusbiga Dimuquraadiga Ee Doorashada Dhexe Oo Trump Ku Noqonaysa Culays Siyaasiya Oo La Soo Darsay
November 7, 2018 - Written by editor marsan
Hase ahaatee xisbiga Mr Trump ayaa la filayaa iney xajistaan awoodda ay ku leeyihiin aqalka odayaasha ee Senete-ka, Doorashadii dhacday shalay oo Salaaso ahayd ayaa loo arkay mid afti u ah awoodda maamul ee madaxweynaha, inkastoo aanu doorasho u taagneyn tan iyo sannadka 2020-ka.
Gobolka Florida, siyaasiga garabka bidix ee lagu magacaabo Andrew Gillum ayaa qirtay inuu ku guul darreystay tartankii qadhaadha ee uu kula jiray siyaasiga xisbiga Trump ka socday ee lagu magacaabo Ron DeSantis.
Balse gabadha ka socotay Dimuqraaddiga ee lagu magacaabo Stacey Abrams, taas oo lagu waday iney noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo Badhasaab ka noqota Mareykanka ayaa diidday in looga adkaaday tartanka ay la gashay murashaxa Jamhuuriga ee Brian Kemp, oo ay ku loollamayeen gobolka Georgia.
Trump wuxuu sheegay inuu faraxsan yahay, natiijada ay Jamhuuriga ka heleen doorashada aqalka sarena ay tahay mid loo dabaal-dagi karo.
Laakiin waxaa xaqiiqo ah in guusha ay Dimuqraaddigu ka gaadheen aqalka hoose ay horseedi doonto in loollan loo galiyo si aanu hore u dareemin, Waxaa laga yaabaa inuu dhaco is mari waa ka dhasha qodobada qaar ee uu ula yimaado aqalka.